आक्रमक एनआइसी एशिया बैंकले ३ महिनामै अर्ब कमायो, अरु सूचक कस्ता ? – Clickmandu
आक्रमक एनआइसी एशिया बैंकले ३ महिनामै अर्ब कमायो, अरु सूचक कस्ता ?
क्लिकमान्डु २०७६ मंसिर १ गते १०:१९ मा प्रकाशित
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बंैकले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो त्रैमासमै ३४ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएको वित्रीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यो अवधिमा बैंकले १ अर्ब १ करोड खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको खुद नाफा ७५ करोड रुपैयाँ थियो ।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामै बैंकले १३ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ६३ अर्ब र निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँले बढाएर १ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
यसरी निक्षेप, कर्जा तथा अन्य वित्तीय परिसूचकहरुमा यस बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ । बैंकको वार्षिक विन्दुगत आधारमा प्रतिशेयर आय ११ प्रतिशतले वृद्धि गरी०.३८ तथा स्वपूँजीमा प्रतिफल १८ प्रतिशतले वृद्धि गरी २७.०५ प्रतिशत पु¥याउन सफल भएको छ ।
बैंकले मुलुकभरका ३१० शाखा कार्यालयहरु, ३८९ एटिएम, ९० वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं ४२ वटा शाखारहित बैंकिङमार्फत् १८ लाखभन्दा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
‘बैंक पनि, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि’ भन्ने मुल नारासहित सहज, सबल, गतिशील, विश्वसनीय र उत्तरदायी बैंकिङको अभ्यास गर्दै आएको यस बैंकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी गत आर्थिक वर्षमा करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुभmाई सकेको छ ।
त्यसैगरी, वित्तीय समावेशीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको न्यून उपस्थिति रहेको मुगु, कालिकोट, बझाङ, रुकुम, जुम्ला, सल्यान लगायतका दुर्गम जिल्लाहरु तथा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नपुगेका ३४ भन्दा बढी स्थानीय निकायहरुमा शाखा विस्तार गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको बैंकका सूचना अधिकारी अर्जुनराज खनियाँले जानकारी दिए ।
एनआइसी एशिया बैंकले बचत खातामा ९.७५% ब्याजदर दिने, भद्र सहमति तोडिएको हो ?